Fahmitaanka Khidmadaha Lacag-hayeyaasha iyo Adeegyada Sharciga ee UAE | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Fahanka khidmadaha dhaqaalaha ee UAE iyo Adeegyada Sharciga
1 Comment	/ qareen, Sharciga ganacsiga, shirkadaha sharciga / By Sarah
Waqti ka mid ah ganacsiga ama xaaladaha shakhsi ahaaneed, marka macmiilkaaga ama alaab-qeybiyeyaashu ay ugu hanjabaan inay u yeerayaan qareenkooda arrimo sharci oo kasta, Markaa waxaad si fiican u heli kartaa qareen ama shirkad sharciyeed "on retainer." Inaad yeelato qareen ilaaliyaha waxay ka dhigan tahay in macmiilkaagu uu qareenka Imaaraatka ka siiyo lacag yar oo joogto ah. Taa bedelkeeda, u-doodehu wuxuu sameeyaa xoogaa adeegyo sharci ah ama talo sharci ah markasta oo aad u baahato caawimaaddooda. Taasi waa macnaha hayaha ama qeexida heysashada. Haysashada kuwa haysta ayaa faa'iido badan u leh ganacsiga u baahan shaqo sharci oo joogto ah, laakiin ma haysato lacag kugu filan oo aad ku qabsato qareen Dubai waqti buuxa ah.
Aad bay muhiim u tahay inaad ogaato goorta aad la xiriirto qareen. Laakiin ka hor intaanad tan sameynin, waa inaad hubsataa inaad haysato kiis. Si kastaba ha ahaatee, marar badan ayaa dhici doonta, markaa, laga yaabo inaadan hubin, waana mid dhameystiran oo xaqiiqda ah in la weydiiyo mid. Laakiin waa inaad haysataa hal shay oo aad maskaxda ku haysid; waxaa muhiim ah in lala shaqeeyo qareenkaaga sidoo kale kalsooni isaga ama iyada. Labada macmiilka iyo qareenku waa inay u shaqeeyaan sidii koox kooxeed haddii ay doonayaan inay helaan natiijooyin wanaagsan.
Maxay tahay khidmadda sii-hayaha?
Kuwaani waxaa si fudud loogu yeeri karaa lacag-bixinno soo noqnoqda oo lagu bixiyo adeegyada qareenka. Waxay asal ahaan siinaysaa dareen kalsooni qareenka in isaga ama iyadu hubaal laga bixin doono adeegyada ay bixiyaan. Mudo intee le'eg ayay xajiyayaashu sii soconayaan? Qandaraasyada Hayayaashu waxay soconayaan hal sano.
Kharashka korjoogaha iyo UAE
UAE waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee shirkadaha sharci ee ugu fiican ayaa diyaar ah. Waxaad ka heli kartaa shirkadaha sharci ee ugu fiican aduunka oo idil oo furan xafiis ama labo qeybta adduunka. Dabcan, qarashka ayaa sidoo kale noqon doona mid aad u sareeya. Kharashka korjoogaha waa wax Qareenada UAE ku qanacsan yihiin. Inkasta oo aad ka heli karto meelo badan oo aan laga yaabo inay dalabaadkaas ka dhigaan, waxaa jira dad badan oo hubiya in lacagtaan la bixiyo kahor intaan adeegyo la bixin. Qareenada wada shaqeeya ayaa ka masuul ah kuwa ugu xiga ee ay raacaan kuwa sare. Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in xitaa kuwa kalkaaliyeyaasha kalkaalisada ah ay ka qaadaan ugu yaraan ugu yaraan. Shirkadaha badankood waxay hubiyaan daahfurnaan buuxa taasina waa sababta ay macaamiishu uga cabsanayaan sameynta maalgalintan. Faahfaahin cadeyn ah ayaa la siiyaa sida meesha ay lacagta u socoto iyo sida loo isticmaali doono. Haddii kharashka dheeraadka ah uu kaco kiis kasta, macaamiisha ayaa loo sheegaa waqtigii oo waxaa la bixiyaa sababo faahfaahsan.
Kiisaska kakan waxaa laga yaabaa inay u baahdaan fiiro dheeri ah oo kharashkuna waxay kordhin doonaan xaaladaha noocaas ah.
Samee Siyaabaha Wanaagsan: La Kulanka Garyaqaankaaga
Waxaa mar walba jira hab sax ah iyo hab khalad ah oo wax qabad ah. Waa inaad marwalba la kulantaa garyaqaankaaga kahor inta aadan go'aan ka gaarin in isagu / iyadu ay tahay inuu kiiskaaga kashifo ama haddii kale. Looma baahna inaad labadiinuba noqotaan saaxiibo laakiin waa muhiim in macaamilka iyo qareenku ay wada socdaan. La kulanka qareenkaaga ayaa kuu ogolaanaya adiga iyo qareenka in aad fahamtaan midba midka kale oo run ahaantii aad ogaatid haddii wadashaqeyntu ay tahay mid suurtogal ah ama haddii kale. Dacwadu waxay u egtahay mid aad u qaali ah adiguna aadan rabin inaad ogaatid xaalada aad horay u bixisay qarashka xajiyaha iyo qashinkaaga qarsoodi ah ama aadan ku kalsoonayn kiiskaaga kiiskaaga. Ha ilaawin inaad isaga bixiso saacadda uu ku siinayo.
Wada-xaajoodka lala yeesho Korjoogaha
Haddii qof kuu sheego in gorgortanka lala yeesho shirkadaha qaan-sheegadka sare ee gaar ahaan meelaha sida UAE aysan ahayn ikhtiyaar, weydii inay mar kale ka fekeraan. Waxaad mar walba u sheegi kartaa waxa aad bixin kartid iyo aad dhegeysan kartid waxa ay tahay inay sheegaan. Waxaa jiri doona fara badan oo leh macaamiisha ku filan oo ay ku dhejiyaan oo ay ku odhan doonaan maya qof kasta oo bixiya dameer ka hooseeya heerka baahida. Laakiin mar labaad, waxaa jira kuwa u naxariis badan oo doonaya inay koraan. Waxay ku heshiin karaan dalab hoose iyo farxad ku saabsan.
Raadinta Qareen Aasaasiyadeed oo wanaagsan oo ku yaala UAE
UAE waxay leedahay shirkado badan oo waaweyn oo u dhaca inay noqdaan kuwa ugu fiican adduunka. Waxaa jira shirkado sharci ah oo bixiya adeegyo sharci oo loo maro qareennada kuwaas oo ka tirsan dhaqamo kala duwan iyo asal. Waxay si fiican u qalabeeyeen aqoonta dawlado badan. Helitaanka qareen wanaagsan oo ka socda UAE maahan heshiis weyn. Haddii jeebkaadu buuxsamaan, waxaa lagaa qaadi doonaa si aad u wanaagsan. Waxaad sidoo kale ka heli doontaa qareeno badan oo ka soo jeeda asalka kala duwan waxayna ogaan doonaan sida luuqadda Carabiga looga hadlo.
Weydii su'aalo badan oo isku day inaad sheegto xaqiiqooyinkaaga si faahfaahsan si uu qareenku u ogaado wax walba ka hor. Wax kasta oo cajiib ah marka kiisku socdo lama soo dhaweynayo shirkadahan Dubai ee UAE.
Talo sharci ah oo haboon: miyuu ka jiraa Dubai?
Waxaa jira shirkado wanaagsan oo ka jira UAE kuwaas oo doonaya in ay kordhiyaan aqoontooda kuwa cusub ee ku cusub adduunka sharciga iyo inaysan si dhaqso ah ugu helin lacag caddaan ah oo ay gacmahooda ku helaan. Waxay u ogolaadaan macaamiisha in ay wadaagaan jahwareerkooda ayna ka wada hadlaan wax kasta si faahfaahsan si ay u ogaadaan haddii ay xitaa leeyihiin sheegasho ama aan ahayn. Marka arrintan la dhammeeyo, waxay markaa kaala talin karaan in ay qortaan garyaqaan ku habboon oo xitaa hagaya iyaga marka loo eego kharashyada ku xigi doona dhammaantood. Waxaan kaa codsanaynaa inaad noo soo dirto shuruudahaaga Heshiiska Hore ee Kaydsiga gujinaya halkan ama Codso kulan si looga wada hadlo.
1 wuxuu ku fikiray "Fahmitaanka Khidmadaha Lacag-haynta iyo Adeegyada Sharciga ee UAE"
Gacaliye Sir / Madam,
Anigu waxaan khilaaf kala kulmayaa horumariyaha cidda bixinaysa canshuurta. Waxyaabaha soo socdaa waa soo koobidda kooban ee xaqiiqooyinka kiiska:
Waxaan ballansaday qorshe cutub oo hudheel ah oo qolka hudheelka leh oo leh horumariye July 2014.
Foomka Diiwaangelinta waxaa saxiixay labada dhinac.
Foomka ayaa qeexay qiimaha, jadwalka lacagta iyo faahfaahinta muhiimka ah ee cutubkan.
Foomku wuxuu ka aamusay VAT.
Waxaan billaabay inaan bixiyo lacag bixinta jadwalka.
Dhanka kale, oo aan taariikhda diiwaangelinta la sameynin DLD, maadaama aan la diyaarin HBS.
Waxaan helay hindise hindise ah oo ku saabsan Jan 21, 2018. Waxaa jira shuruudo iyo shuruudo khilaaf ah oo lagu xallinayo.
Dukumiintiga kaliya ee lagu heshiiyey ilaa maanta waa Foomka Boos celinta ee saxiixan oo wali ka aamusan VAT. Waxaan fahansanahay in horumariyeyaashu ay ahayd inay ila xaajoodaan kahor Jan. 01, 2018 qiimaha lagu sheegay, in aysan sameynin oo qiimaha Foomka Boos celinta uu adkeeyo, si waafaqsan.
Horumariyaha ma doonayo inuu fuliyo Xeerarka Ku Meel Gaarka ah ee lagu caddeeyey sharciga VAT oo wuxuu ku adkaysanayaa in VAT tahay masuuliyadda iibsadaha.
Marka labaad, horumariyaha ayaa i weydiisanaya inaan u diro iyada Khidmadda Diiwaangelinta DLD, isla markiiba, haddii kale waxaa jiri doona ciqaab aniga ayaana masuul ka noqonayaa inaan bixiyo ciqaabta. Waxay tixraaceysaa ogeysiiska DLD ee ku saabsan waqtiga kama dambaysta ah ee diiwaangelinta ee ku taariikhaysan Juun 25, 2015 oo Carabi ah (nuqul ku lifaaqan). Waxaan fahansanahay in taariikhda la saxeexay HBS la tixgelin doono taariikhda iibsiga ee tirinta maalmaha daahitaanka ee sameynta arjiga diiwaangelinta ee DLD.
(Qaybta bogga 2 ee 2)
Fahmitaanka Racfaanka Dembiyada ee Dubai: Maxaad ugu baahan tahay Garyaqaan Rafcaanka Dembiyada ah.
Sida Sharci Loogu Maal Gashado Guri Guri ahaan Qurbajoog ahaan. Tilmaamaha iibsashada guryaha ee Dubai
Ogaanshaha Xuquuqdaada Sharci ee Ganacsi: Dacwadaha Ganacsi iyo Xallinta Khilaafaadka
Muhiimadda Talo Bixinta Sharciga ee Heshiisyada Ganacsi ee Dubai, UAE